प्रकाशित मिति : January 5, 2019
जाडो मौसममा बढी देखिने रुघा खोकीका साथै ज्वरो एक आम समस्या नै हो। जाडो बढेसँगै प्राय व्यक्ति चिसो लागेर रुघाखोकी र ज्वरो बाट ग्रसित नै हुन्छन्। यस्तोमा हामीले समयमै ख्याल नगर्दा यो समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ। घाँटी खसखस हुने, नाक बन्द हुने, नाक चिलाउने, खोकी लाग्ने, रुघाबाट ग्रस्त हुने, टाउको दुख्ने र नाक बाट पानी वा सिंगान बगिरहने वा पाकेको रुघाखोकीलाई हटाउने घरेलु उपचार विधिहरु रहेका छन ।
१. तुलसीको पात: तुलसीको पात कयौँ रोगहरुको लागि एक अचुक घरेलु औषधी हो। यसले मुटु रोग वा पेट सम्बन्धी बिमारीहरुलाई निको पार्नुका साथै यो रुघाखोकी, ज्वरोको लागि एकदम फाइदाजनक हुन्छ। यसको लागि एक गिलास पानीमा ५/६ ओटा तुलसीको पात राखेर मज्जाले उमाल्नुहोस्। उमालीसकेपछी मन तातो वा चिसो भएपछी यो पानी पिउनुहोस्। दिनभर २/३ पटक गरेर थोरै थोरै पिउनुहोस्। यसले रुघाखोकी, ज्वरो, घाँटी दुख्ने, नाकबाट सिंगान बग्ने जस्ता समस्याहरुबाट छुटकारा दिलाउन मद्धत गर्छ।
२. मेथिदाना: मेथी दाना पनि अनेक गुण भएका एक घरेलु औषधी हो। यसले रुघा, खोकी, चिसो, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्याहरुलाई छिट्टै निको पार्छ। मेथी दानाको सेवनले शरीरमा चाँडो गर्मी हन्छ, जसको कारण यस्ता समस्याहरुबाट तुरुन्तै राहत मिल्छ । यसको लागि एक गिलास पानीमा एक सानो चम्चा मेथी दाना राखेर ५-१० मिनेटका लागि उमाल्ने। उमालीसकेपछी मन तातो बनाएर दिनमा २ पटक यो मेथी पानी सेवन गर्नुहोस्।
३. मरिच: मरीचमा एन्टीब्याक्टेरियल प्रोपर्टीज् पाइन्छ। जसले चिसो, रुघाखोकीको इन्फेक्शनलाई एकदम तीब्र रुपमा निर्मुल पार्छ। यसको लागि एक चम्चा महमा एक चिम्टी मरिचको पाउडर मिसाएर दिनमा २/३ पटक सेवन गर्नुहोस्।
४. अदुवा: घाँटी दुख्ने वा खोकी जस्ता समस्याहरुका लागि अदुवा एकदम लाभदायी चिज हो। यी समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि अदुवालाई ग्रेट गर्ने। त्यसपछी एक गिलास पानीमा एक चम्चा ग्रेट गरेको अदुवा राखेर उमाल्ने। यसरी उमालीसकेपछी मन तातो बनाएर पिउनुहोस्। दिनमा २ पटक यसरी उमालेको अदुवा पानी सेवन गर्नुहोस्।
५. बेसार: आयुर्वेदमा बेसारलाई शरीरको शुद्धिकरणको लागि पुर्खौं देखि प्रयोग गरिंदै आएको एक अचुक औषधी हो। बेसारले जस्तो सुकै ज्वरो वा जिउ दुख्ने रोगलाई निको पार्छ। रुघाखोकीबाट तुरुन्तै राहत पाउन बिहान बेलुका एक गिलास तातो पानीमा एक या आधा चम्चा बेसार पाउडर मिसाएर पिउनुहोस्। अथवा एक गिलास तातो दुधमा एक चम्चा बेसार पाउडर मिसाएर पिउनुहोस्।
६. किसमिस: किसमिसले चिसो मौसममा शरीरलाई तातो बनाईराख्न मद्धत गर्दछ। रुघाखोकी वा चिसो बाट बच्न किसमिसको सेवन गर्दा तुरुन्त लाभ मिल्छ। यसको लागि एक गिलास पानीमा एक मुट्ठी किसमिस र एक चम्चा अदुवाको पाउडर राखेर उमाल्ने। उमालीसकेपछी यसलाई मन तातो बनाएर पिउने। दिनमा दुई पटक जति यो पानी सेवन गर्नुहोस्।
७. अंगुरको जुस: सुख्खा खोकी, घाँटी दुख्ने या रुघाखोकीबाट छुटकारा पाउन बिहान बेलुका अंगुरको जुस पिउनुहोस्। यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम लाभदायी हुनुका साथै रुघाखोकीलाई पनि तुरुन्तै निर्मुल पार्छ।